PS မြှုပ်စာရွက် Extrusion လိုင်း
FS-YTA1100 / 1400 စက်ရုပ်လက်မောင်းဖုန်စုပ် stack စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း
stack စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း FS-YTA100 / 1100 ဖုန်စုပ်
stack စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း FS-YTA600 / 1000 ဖုန်စုပ်
ချပ်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း FS-YT600 / 1000 ဖုန်စုပ်
ပျိုးပင်များအ Tray ထဲကစက်
စက်ဖွဲ့စည်းခြင်းမြှုပ် Tray ထဲကဖုန်စုပ်
EPE Extrusion လိုင်း
PE မြှုပ်စာရွက် Extrusion လိုင်း
PE မြှုပ်ပိုက် / လှံတံ Extrusion လိုင်း
PE မြှုပ် Net က Extrusion လိုင်း
PE မြှုပ်စာရွက် Bond စက်
PE Extrusion လိုင်း
အသီး Sorting စက်
အသီးလျှော်မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ် grade စက်
မေလ 1st, 2011, တရုတ်ရေမြှုပ် tableware ၏ပိတ်ပင်မှုရုပ်သိမ်း
1990 မတိုင်မီမွေးဖွားနိုင်ငံသားများအတွက်, ရေမြှုပ် tableware အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီး, ဒါပေမယ့်ဆန်ဟင်းလျာများကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အရာဝတ္ထုပြောင်းပြန်ထားရပါမည်။ သောကြောင့်ယင်း၏ Non-degradation ၏, "အဖြူရောင်လေထုညစ်ညမ်းမှု" ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုမြေတပြင်လုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုနှိုးဆွပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာတောင်မြောက်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးပါပြီ ...
18-07-12 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
နယူးအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာမူဝါဒ! သွင်းကုန် & ပို့ကုန်အပေါ် manifest နည်းဥပဒေအပြောင်းအလဲများ!
မေလ 1st, 2011, တရုတ် fo ၏ပိတ်ပင်မှုရုပ်သိမ်း ...
နေရပ်လိပ်စာ: LANGAO စက်မှုဇုန်များ, LONGKOU CITY, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, 265701, တရုတ်
ဖက်စ်: +86 535 8635389